पुरुषको जिम्मेवारी ‘काँध’ र महिलाको ‘योनी’भित्र लुकेको समाजको असमान कुरुपता
१२२९ पटक पढिएको
जैविक रूपमा पुरुष र महिला समान पक्कै छैनन् । तर लिङ्गधारी पुरुषको काँध र योनीधारी महिलाको काँधमा असमान पक्कै छैन् । हामीले आजसम्म पुरुषको काँध र महिलाको योनीलाई जसरी व्याख्या गर्यौं, त्यसले पितृसत्ता जबर्जस्त लादेको थियो । पुरुषहरु जिम्मेवारीको भारी बोक्ने भरियाहरु हुन् जुन भारी महिलाले बोक्न सक्दैनन् भनेर व्याख्या गरियो । पुरुषभन्दा महिला तलै हुन् र हुनुपर्छ भन्नेखाले तर्क गर्दै थियौं । तर अब ती तर्कहरु थोत्रा भइसके । तपाईंलाई केके नमिलेको जस्तो लागिराखेको होला हैन् ? पख्नुस्, म बुझाउँदै जान्छु । माथीको मेरो शीर्षकलाई दुई चरणमा विश्लेषण गरेर सार्थक गर्ने कोसिस गर्छु ।
पुरुष घरको खम्बा हो । जिम्मेवारीको पिल्लर हो । यी सुन्दै आएका वाक्य हुन् । ‘पुरुषलाई घरको पिल्लर’ भनिएको वर्षौं भयो । यसको कारण खोज्नेक्रममा मैले बुझें । पुरुषले कमाएर ल्याउने, लालाबालाको शिक्षा–दीक्षा आर्थिक प्रबन्ध गर्ने, परिवारका सदस्यहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने र समग्र घरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भएकाले त्यसो भनिएको रहेछ । अलि पहिला पुरुष जातिलाई दिएको त्यो उपमा सुहाउँदो थियो । तर अब बदल्ने बेला भएको छ । कारणस् घरमा पुरुष मात्र हैन्, महिला पनि जिम्मेवारीको पिल्लर बनेका छन् । श्रीमानलाई घरमा छोडेर श्रीमती बिदेश गएका छन् । घरमा बस्ने श्रीमान र जागिरमा जाने श्रीमती त आजभोलि समाजका एक तिहाइ घरमै भेटिन्छ । समाजले नै दिएको यस् उपमा र बुझाइलाई बद्लने बेला भयो । अधिकांश देशमा राष्ट्रप्रमुख नै महिला भइसकेको अबस्था त नौलो भएन । तब आधा आकाश ढाकेर बसेकी महिलाप्रति न्याय हुन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा हामीले बुझ्ने महिला सिर्फ ‘योनीधारी प्राणी’मात्रै हुन् । एउटी महिला जब बलात्कृत हुन्छिन्, त्यसपछि समाजमा घृणित हुन्छिन्, बाटोमा हिड्दा कामुक दृष्टिहरुबाट लज्जित हुन्छिन्, तब उनलाई आफू ‘योनीधारी’ भएकोमा हिनताबोध हुँदो हो । रामायणमा प्रसंग छ– सीतालाई रावणले हरण गरेपछी पुनः रामले सीतालाई फिर्ता ल्याउँछन् । तब रामले सीताको योनिको पवित्रता जाँच्न सीतालाई अग्निपरीक्षा दिन लगाउँछन् । अझैसम्म बलात्कृत महिलालाई विवाह गर्ने पुरुषको खडेरी छ । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको त कुरै नगरौं । अझ बलात्कारलाई मलजल त त्याँ बाट गरिन्छ, जब बलात्कृत महिलालाई आरोप लगाइन्छ, छोटा कपडा लगाउनाले बलात्कार भयो, छाडा बोल्नाले बलात्कृत भईस, बलात्कृत महिलाको मुख छोपिन्छ र, अपबित्र भएको ट्याग लगाइन्छ’। महिलाको ‘इज्जत’ उनको ‘योनी’ र ‘योनीको पवित्रतासंँग’ गाँसिएको छैन् भनेर कहिले बुझ्ने ?
महिलाको यौन स्वतन्त्रता
समाजको सतही कुरा गरौं । पुरुषको इच्छाअनुरुप महिलाले यौनक्रिडामा भाग लिनुपर्छ । महिलाको कुमारीत्व परीक्षण (भर्जिनिटी टेस्ट) त छुटाउनै भएन । भर्जिनिटी टेस्ट । सुन्दै अबैज्ञानिक तर्क जस्तो लाग्दैन ? तर हाम्रो समाजको धरातल यहीं हो । दुईवटा प्रसंग हेरौं ।
प्रसंग नम्बर १ः सप्तरी जिल्लाकी एउटी महिलाले आफ्नै श्रीमान विरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिईन् । बडो अनौठो लागेर मैले यस् घटनालाई ‘फलो अप’गरें । आफ्नै श्रीमानविरुद्व उजुरी, आखिर किन ? ती महिलाको जवाफ सुनें । ‘सुत्केरी भएर ३ दिन भएको थियो, रक्तस्रावको पीडा असह्य भइरहेथ्यो । उहाँ (श्रीमान) ले यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राख्नुभयो । मैले आफूलाई असह्य गारो भएको बताए तर उहाँले मलाई जबर्जस्ती लुछ्नुभयो । म लुछिए । मैले न महिनावारीको पीडा भन्न पाएकी छु, न सुत्केरीको, न त शारीरिक पीडा नै भन्न पाए । बस्, श्रीमानको इच्छाको अघिल्तिर म ‘सेक्स टोय’मात्र भइरहे ।
प्रसंग नम्बर २ः घटना पश्चिमतिर हो । एक १९ वर्षीय किशोरीले आत्महत्या गरिन् । कारण धेरैपछि सार्वजनिक भयो । हेर्दा सामान्य लागेपनि समाजको थुप्रै यथार्थलाई गिज्याइरहेको थियो, त्यो आत्महत्याको कारणले । ती किशोरीको प्रेमी थिए । कहिले प्रेमीको तर्फबाट त कहिले प्रेमिकाको तर्फबाट ‘यौन सम्पर्क’को प्रस्ताव भइरहन्थ्यो । तर संम्भव भएन । उनका प्रेमीको बयानअनुसार ती किशोरी आफ्नो बुबाआमाको इज्जत नजाओस् भन्ने चाहिन्थिन् । र, त्यो दिन उनले आफ्नो यौनचाहानालाई दबाउन सकिनन् र आत्महत्या गरिन् ।
जब एउटी महिलाको विवाह हुन्छ, तब सिकाइन्छ– लोग्नेको इच्छा पूरा गर्नु, समाजमा इज्जत राख्नु, धेरै र ठूलो स्वरले नबोल्नु, सबैले भनेको मान्नु’। विवाह पश्चात ती महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन त सुरु भयो नै, उसको यौनचाहाना र यौनअधिकारमाथीको हनन पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । बिहेपछि महिला अङ्गहरूमाथि पुरुषको एकलौटी हैकम सुन्दा सहज र मनन गर्दा गारो विषय हो । भोग्ने कुराको अनुभव झन कति कहालीलाग्दो होला ?
महिलाको यौन स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा छुटाउनै हुन्न् । महिलाले विवाहइतर सम्बन्ध राख्न नसकुन् भनेर पतिद्वारा कपडा, फलाम, तामा, पित्तल आदिबाट निर्मित बेल्ट महिलाको गुप्ताङ्गमा लगाइदिने र उक्त बेल्टको साँचो श्रीमानले आफूसँग राख्ने प्रचलन अझै पनि अरबी मुलुकहरूमा भेटिने गर्छ । अर्को, योनी छेदन गर्ने चलन झन बयान गरिनसक्नुको छ । के महिलालाई आफ्नै शरीरका अङ्गहरूमा उनीहरूकोे आफ्नो अधिकार हुनुपर्दैन ? यो महिलामाथिको अपमान हैन् ? महिलाको यौन स्वतन्त्रतामाथिको उल्लङ्घन हैन् ?
महिलाहरुलाई अझ कमजोर त्याँबाट प्रस्तुत गरिन्छ, जब उसको योनीलाई इज्जतसँग जोडिन्छ । बलात्कृत महिला ‘इज्जत’ लुटिएको ठानिन्छे, समाजमा ठाडो शीर गरेर हिड्न सक्दिन्, उसोभा बलात्कारी पुरुष चाही छाती ठोकेर खुलेयाम हिड्न मिल्छ ? महिलाले मात्र ‘इज्जत’ गुम्ने डरले कहिलेसम्म यौन कुन्ठा पालेर बस्नुपर्ने ?
हेर्दैगर्दा पुरुषलाई अन्याय गरेको भन्नुहोला । तर एकछिन..... एकल महिला थुप्रै भेटिन्छन्, जवाफी निकै कम पुरुष । विद्यालयमा प्रथम हुनेहरुमा किशोरी नै हुन्छिन्, जवाफी एकाध पुरुष । यहीँ हो वास्तविकता ।
तपाईंको मनमा आइरहेको होला, उसोभा समाज निर्माणमा पुरुषको चाहिँ कुनै देन छैन् ? कि महिलाभन्दा पुरुष तलै हुन् ? होईन, विल्कुल होईन् । पुरुषको त्याग र देनबारे अर्को कुनै लेखमा कुरा गरौंला । तर आजको धरातल यहीँ हो । समान जागिर गर्ने एउटै घरका श्रीमान र श्रीमतीबीचमा श्रीमती बढी जिम्मेवारीमा हुन्छिन्, पुरुष जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । बच्चाहरुको पढाइ, घरको कामधन्दा, सासू ससुराको स्याहार ती श्रीमतीको अतिरिक्त जिम्मेवारी हुन् । तब सृष्टिको संम्भव हुने भनेकै पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको प्रोजेस्टोरनबाट हो । जिम्मेवारी, देन, त्यागको मूल्यांकनमा दुबैलाई एउटै डालोमा हालेर जोख्दा किन नमिल्ने ?